မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဗေဒါနဲ့ Expired (သို့) စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ (၄)
စိတ်လည်းမကောင်းဘူး... ရီလည်း ရီချင်တယ်....
ပါစတာလေးစားပြီး မျက်ရည်ကျနေတဲ့ ကောင်မလေးကို သနားသွားတယ်...း(
ဟဲ..ဟဲ.. ဒါပေမယ့် expire ဖြစ်နေတဲ့ မုန့်လေးတွေတော့ စားချင်တယ်...:P
အရေးကောင်းတယ်.... မျက်စိထဲမှာ အခုမြင်ယောင်နေတယ်... ဟား..ဟား... ဘာဂါတွေ နောက်ဆုံးမှာ ဖွက်ထားတဲ့ကောင်မလေးကော... ၀ယ်သူကို တော်ကီပွားနေတဲ့ ကောင်မလေးရော... where is the eight? (အိတ်ခ်)
မနိုင်ဘူး။ မနိ်ုင်ဘူး။ နာဆိုင်ဖွင့်လို့ကတော့ ဒီလို စတက်ဖ် တွေကို သတိထားရမယ် :)
11/26/2008 2:36 PM
အဟဲ ကျွန်တော်လဲ စင်းဂလိပ်တွေကို နားမလည်ဘူးဗျ...။ လားတွေ မားတွေက နားကလော တယ်နော်။ အိုကေလား ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကြားစတော့ ဟင် မြန်မာ စကားလားလို့တောင် ထင်နေတာ ရီရတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တုန်းက အဒေါ်က မနက်စာသွားဝယ်ခိုင်းလို့ မနက်စာသွားဝယ်တာ ဟင်းချက်စရာ အတိုအထွာလေးတွေ အနီးနားက ဈေးကို သွားဝယ်ခိုင်းတယ်။( ဈေး ၀ယ်တဲ့အခါလဲ တရုတ်လိုလဲ မတတ်တော့ ဈေးနှုန်းတွေကို ဘိုလိုပြောခိုင်းရတယ် မဟုတ်ရင် ဘာ..လျိပိုင်ခွမ်းဆိုလား ဘာခွမ်းဆိုလား အဲ့လိုတွေ ပြောလွန်းလို့..ဟတ်ဟတ်)အဲ့ဒိနားက ဈေးက အပေါ်ထပ်မှာက စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေလေ အဲ့ဒိတော့ကျနော်လဲ တခြားဟာတွေ ၀ယ်ပြီးတော့ အီကြာကွေး ၀ယ်မယ်လုပ်ကော...။ သွားသတိရတာက ဟိုက်.. အီကြာကွေးကို ဘယ်လို ပြောပါလိမ့်...။ ဟိဟိ တော်တာအဲ့လို..။ ဒါနဲ့ မဟုတ်သေးပါဘူး ဒီလိုပဲ လျှောက်ကြည့်အုံးမှပဲဆိုပြီး လိုက်ကြည့်တယ်...ကိုယ့်ဟာကိုယ်။ နောက်တော့ အဲ့ဒိက အသိဦးလေးတစ်ယောက်ပြောထားတဲ့ ရွှတ်နောက်နောက် စကားကို သွားသတိရတယ် (အမှန်တော့ တကယ်လဲ အသုံးဝင်တယ်) :P ဟေ့ကောင် ဒီမှာဈေးဝယ်လို့ အခေါ်အဝေါ်တွေ မသိရင် လွယ်လွယ်လေး ၂ခွန်းပဲသုံးတဲ့။ ဘာတဲ့ This one , This one ဆိုပြီးတဲ့လေ။ အဟတ် ကျွန်တော်လဲ လက်တွေ့အသုံးချလိုက်တာ အိုကေသွားတယ်...။ အော် this one this one.. ဟိဟိ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ မေးကြည့်တော့မှ အီကြာကွေးကို အီကြာကွေးလို့ပဲ ခေါ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ဟီးဟီး:D
ဟားဟား။ အရင်က ကျွန်တော်လည်း 7-11 မှာ လုပ်ဖူးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း FM ရေဒီယိုသံကြားရင် အဲဒီအချိန်ကို ပြန်သတိရတယ်။
ဟား..ဟား.. Loi Lem ရေ.. အမှန်ပဲ.. FM ကြားရင် အဲဒိဘ၀ပြန်သတိရလို့..
မိုးနေရေ.. သနားရင် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် ထမင်းလိုက်ကြွေးနော်..
ဟန်လင်းထွန်းရေ.. တခါတလေတော့ စတက်ဖ်တွေကို နေရာလေးပေးနားလည်ပေးရတယ်.. ဆိုင်က ကိုယ်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိတာလေ.. သူဠေးက အမြတ်ထဲမှာ ထည့်တွက်ပြီးသားတွေပါ..
မင်းယွန်းသစ်ရေ.. ဟုတ်ပ.. 7-11 မှာလုပ်မှ ကြက်ဥကို တရုတ်လို "ကျီးသန့်" လို့ခေါ်တာတွေရော.. တော်တော်တတ်သွားတယ်. အီကြာကွေးကို အီကြာကွေးလို့ပဲခေါ်တယ်..
ပူရီကို ပူရီလို့ပဲခေါ်တယ်.. အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အတူနေအမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အလွဲလေးတွေလဲရှိသေးတယ်.. နောက်မှပဲ ဖော်ပြတာပေါ့နော်..
i worked in watson b4.. i was around 19...
in my second week,alady bringabreast enhancement lotion and ask me how to apply it.. I was like.. oh gosh.. and just freeze there… 
To Burmesegoldbull - Yes.. customer just consider that we know everything about the things which sell in the store. After working asasale person in 7-11, i haveahabbit of finding things on my own and rarely ask about the things i want to buy.
11/26/2008 3:19 PM
ကျနော်လဲ SG ကိုအလုပ်လာရှာတော့ အလုပ်မရခင်ကအေးဆေးပါ
ပထမလ တော်တော် အငတ်ဇရား ခင်းလိုက်ရတယ် ဘာပဲပြောပြော
မဗေဒါ က အမရှိပါသေးတယ် ကျနော်အသိကောင်းလေးတွေဆို
ကျောင်းတက်ရင်းကူလီထမ်းတယ် ဒါပေမဲ ညရောက်တော့အကုန်
11/26/2008 3:33 PM
ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလေ အမလဲ ရောက်စက အိမ်မှာနဲ့ယှဉ်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့နေ့တွေရှိတယ် အခုတော့အရေထူသွားပြီထင်ပါတယ် ။ BTW ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးတဲ့ မဗေဒါကို လေးစားမိပါတယ်။ :)
မိုးနေပြောသလို .... စိတ်လည်းမကောင်းဘူး... ရီလည်း ရီချင်တယ်....
ဒီရောက်မှ ဗျူဒင်= building, ဟျူး= hill လို့မှတ်ထားရတယ်။ အိတ်= egg ကို မှတ်ထားဦးမှ။
retkhita ရေ.. စကာင်္ပူမှာ အချိန်ပိုင်း ကူလီထမ်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်လို့ မကြားဘူးဖူး.. ရှိလို့လားဟင်..
မမေမိုးရေ.. No place is like home လေ.. ဒါပေမဲ့ခုတော့ စလုံးကိုတောင်တော်တော် နေသားကျနေပါပြီ.. လာဖတ်ပြီးကွန်မန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
စင်ဒန်းလား (မှန်လားသိဘူး ခေါ်ပြီနော်)
ဟုတ်ပ.. အဲဒိစာလုံးတွေကို သူတို့အဲလိုပြောတာ စင်ဒန်းလားပြောမှပဲ လိုက်ပြောကြည့်တော့.. ဟုတ်သဗျာ... စာလုံးတွေလာ ဖလှယ်ပေးတာကျေးဇူး..
Lol.. you remind me of that 7-11 store.. haha... why didnt you teach me "hidding food" technique at that time??? =D
nyquist - haha.. i know you are the fun of စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ.. i mostly see ur comments in that label. Thank anyway. I can't teach you at that time. Coz i recommended you to that store. If u do sth wrong, it will be my responsibility. So do as i say, don't do as i do. hahahha
11/26/2008 11:32 PM
သူများကိုသတိပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ၊ကိုယ်တိုင်လဲသတိထာစားဦ၊expireဖြစ်နေတဲ့မုတ်တွေစားပြီဗိုက်နာလို့ မျက်ရည်ထက်ကျနေဦမယ်နော်။နော်ကောဘာတွေလွဲသေလဲထက်ရေဘာဦဖတ်လို့ ကောင်းလို့ အာပေးနေမယ်။
ဗေဒါလဲ ငါ့လိုကိုး..... ငါက 7-11မှာ မဟုတ်ဖူး။ Nordstrom In House Coffee Bar မှာဟ......
မဗေဒါလေးရေ..ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။
11/27/2008 12:04 PM
မဗေဒါရေ..အတူတူပါပဲ။ အလုပ်လုပ်တာ အနှိမ်ခံလိုက်ရတာလည်း ပြောမနေနဲ့။ တရုတ်အဒေါ်ကြီး နှစ်ယောက်က သူဌေးရှေ့မှာ I cannot catch up ur english တဲ့။ ကိုယ်လည်း သူ့စကား မနည်းနားထောင်နေရတာတော့ အမှန်။ :(
11/27/2008 11:50 PM
11/28/2008 6:23 PM
ဟား.. ဟား.. ဇီးရိုးကို ဂျီးရိုးလို့ အသံထွက်တာက မလေးရှန်းတွေအမရ.. အဲဒိကိစ္စကို အရင် အလုပ်မှာတုန်းက စလုံးတစ်ယောက်ရယ် မလေးရှန်းရယ်နဲ့ စမ်းကြည့်ပြီးပြီ.. စလုံးက ဇီးရိုးပဲ ထွက်တယ်.. မလေးရှန်းက ဂျီးရိုးတဲ့... မြင်းကျား (ဇီးဘရား) ကို လဲ.. မလေးရှန်းက (ဂျီးဘရား)တဲ့... ဟီး... ဖိုင်နဲ့ဖောင်တော့.. ခုမှသိတယ်.. သတိထားပြီး နားထောင်ကြည့်အုံးမယ်.. အိတ်ခ်ျကို ဟိတ်ခ်ျလို့ထွက်တာတော့ ဟုတ်တယ်.. ဒါနဲ့ ဥက အက်ခ် က အမှန်လား အိတ်ခ်က အမှန်လား.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး စလုံးအသံထွက်ကမှန်တယ်ပြောလို့.. မဗေဒါလဲ မသိတော့ဘူး... မြန်မာပြည်က ငယ်ငယ်ကဆရာမပဲ မှားသလား မသိတော့ဘူး...
11/28/2008 7:08 PM
11/28/2008 8:04 PM
အင်္ဂလိပ် အသံထွက်နဲ့ အမေရိကန် အသံထွက် ကွာတာပါ။ အက်ခ် or အိက်ခ် ၂ ခုလုံး မှန်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်က အက်ခ် လို့ထွက်ပြီး အမေရိကန်က အိက်ခ် လို့ထွက်တယ်။
Z ကို အင်္ဂလိပ်က ဇက်လို့ထွက်ပြီး အမေရိကန်က ဇီ လို့ ထွက်သလိုပေါ့။
Cambridge Learners' Dictionary မှာ ကွဲပြားတဲ့ အသံထွက်ကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇီးရိုးကို ဂျီးရိုးထွက်တာတော့မှားတယ်ထင်တာပဲ.. www.dictionary.com မှာ နားထောင်တာတော့ ၁ခုက [zeer-oh] လို့ထွက်ပြီး.. နောက်တစ်ခုက (zîr'ō, zē'rō) လို့ထွက်ပါတယ်.. နားထောင်ကြည့်ရင်တော့ ဇီးရိုးပါပဲ.. ဒါရော ဂျီးရိုးထွက်တဲ့သူကမှန်လား..ဟင်... ?
ဒါပေမဲ့ something ကို ဆမ်းဆင်းလို့ တချို့ ထွက်သလိုပေါ့။ သ-သံကို တချို့က ဆ-သံနဲ့ ထွက်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဇ-သံကို ဂျ-သံနဲ့ ထွက်တာများလား ... ။
11/29/2008 2:03 AM
11/29/2008 5:59 AM
ဒါဆို အိတ်ခ်လို့အသံထွက်တာ အမှန်ပေါ့? အက်ခ်မဟုတ်ဘူးပေါ့..? စလုံးအသံထွက်ကမှန်တယ်ပေါ့? ငယ်ငယ်က သင်ရတာမှားနေတာပေါ့..
အဟဲ.. လာလည်လို့ရပါတယ်... ဝင်ကြေးမပေးပဲ အခမဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေအားလုံး ဘတ်စ်ကားခနဲ့ အချိန်အကုန်ခံပြီးလိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. ခင်တတ်ပါတယ်.. ဘော်ဘော်တွေပဲ.. ဟဲ.. ဟဲ.. အလိုက်သိရင်တော့ မုန့်ဝယ်ကြွေးပေါ့နော်.. ငှဲ.. ငှဲ..
11/29/2008 8:27 AM
ဖြစ်ရလေ မဗေဒါရယ် ...
ဘ၀ဆိုတာ ဒါမျိုးလည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်ဗျာ ...
တစ်ခါတုန်းက အရမ်းစိတ်ညစ်၊ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ခံစားခဲ့ရဖူး
တာတွေက တစ်ချိန်ရောက်ရင် အခုလို အမှတ်ရစရာ၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေ
လေးစားပါတယ် မဗေဒါ ... ။
11/29/2008 8:49 AM
မဗေဒါရေ.. FM ရေဒီယိုသံကြားရင် သတိရတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါလိမ့်။ ကျတော်တကယ် မသိလို့မေးတာပါ။ ကျတော်လည်း ဒီရောက်စက အိမ်ကို အရမ်းသတိရတယ်။ တခါတလေ ၁၀တန်းတုန်းက သင်ခဲရတဲ့ the slave's dream ကဗျာလေးကို ရွတ်လိုက်မိတယ်။ ငါဘဝနဲ့ နီးစပ်နေပါလားလို့။ အခုတော့လော နေသားကျနေပါပြီ..
11/30/2008 7:42 AM
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အိတ်ခ် ခံရတာ ထင်တာ။ အတူတူပဲကိုး။ ကိုယ်တွေက အက်ခ် လို့ အသံထွက်တော့ သူတို့က ပြူးပြဲကြည့်သေးတယ်။ မှားတယ်ဆိုပဲ။
Wunna Ko Ko said...
Indians pronounced as ဂျီးရိုး.
It is their Ingalish
ပုလုကွေးရေ.. 7-11 ဆိုင်တွေက FM ကို ၂၄နာရီဖွင့်ထားတတ်တော့ အဲဒိမှာ အလုပ်လုပ်ရင် ရေဒီယို အမြဲနားထောင်ဖြစ်တယ်.. တခြားချိန်တွေမှာတော့ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး.. ဒီတော့ FM နဲ့ 7-11 ၊ 7-11 နဲ့ FM ကတွဲနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့.. အဲဒါကြောင့်ပါ..